အီတလီမှာပေါ့ပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းအမိန့်ကတော့ Uber - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အီတလီမှာပေါ့ပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းအမိန့်ကတော့ Uber” ရောမမွို့ရှိ Stephanie Kirchgaessner ကရေးသားခဲ့သည်, The Guardian ကအင်္ဂါနေ့တွင် 26 မေလများအတွက် 2015 17.38 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
မီလန်အတွက်တစ်ဦးကတရားသူကြီးကတော့ Uber ရဲ့အပေါ်တံခါးကိုပိတ်ထားခဲ့သည် အီတလီမှာစီး-sharing စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ထိုဘီလီယံမှအဓိကထိုးနှက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း (£ 26.6bn) ဥရောပအတွက်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်မှန်းချက်.
အင်္ဂါနေ့ရဲ့အာဏာရကြောင်း Uber ရဲ့ Pop ဂီတဝန်ဆောင်မှု "မမျှတယှဉ်ပြိုင်မှု" ကိုထိရောက်စွာအများသုံးတက္ကစီဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့တူညီသောစံဖို့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီရရှိထားသူဖန်တီး.
UberPop, ဗြိတိန်တွင် UberX ဆင်တူ, အ Uber စမတ်ဖုန်း app ကိုအသုံးပြုသူများစီးပွားဖြစ်လိုင်စင်မရှိဘဲယာဉ်မောင်းကနေတစ်ဦးစီးနင်းအမိန့်ခွင့်ပြု. နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အီတလီတက္ကစီယာဉ်မောင်းမြင့်မားတက္ကစီလိုင်စင်များရရှိနိုင်မှုအပေါ်အကြီးအကျယ်ကန့်သတ်နှင့်အတူစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်.
ဒါကတကယ်တော့, တရားရုံးအုပ်ချုပ်, UberPop တရားမဝင်လုပ်, ကိုယ့်တစ်ဦးလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ကိုင်မည်သည့်အခြားတက္ကစီကုမ္ပဏီတူ. Uber က၎င်း၏ app ကိုအသုံးပြုသူများမှ၎င်း၏ရရှိမှုကန့်သတ်သောကွောငျ့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးရိုးရာတက္ကစီဝန်ဆောင်မှုမှမတူကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်, နှင့်လမ်းပိတ်ထားခရီးသည်တက်ကောက်မထားဘူး.
Uber က Black, သောကုမ္ပဏီအားဖြင့်ဆောင်စိစစ်ပြီးခဲ့ကြသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုင်စင်နှင့်အတူယာဉ်မောင်းကိုအသုံးပြုသည်, မီလန်နှင့်ရောမမွို့ရှိရရှိနိုင်ဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်.
Related: '' ကတော့ Uber ဆန္ဒပြ’ အနက်ရောင်တက္ကစီယာဉ်မောင်းများက Westminster မှ traffic ကိုပရမ်းပတာဆောင်တတ်၏
ဥရောပတိုက်တွင်တိုးချဲ့ဖို့သတင်းထပ်မံရှုပ်ထွေးကတော့ Uber ရဲ့အစီအစဉ်, ဘယ်မှာကတော့ Uber ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, Travis Kalanick, သူဖန်တီးမယ်လို့ယခုနှစ်အစောပိုင်းကပြောပါတယ် 50,000 အသစ်အလုပ်အကိုင် အဓိကဥရောပမြို့ကြီးများရှိ "သစ်ကိုမိတ်ဖက်" ခွငျးဖွငျ့ identify.
ထိုကတည်းက, Uber စိမ်းလန်းသောအလင်းအိမ်ထက်ပိုပြီးလမ်းပိတ်ဆို့မှုများရင်ဆိုင်ခဲ့သည်. ဒါဟာနယ်သာလန်အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်ဂျီနီဗာ၌ဆန့်ကျင်တားမြစ်မိန့်များ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်. ဂျာမနီမှာ၎င်း၏ peer-to-peer လိုင်စင်မဲ့န်ဆောင်မှု, ပြင်သစ်နှင့်စပိန်လည်းပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြ.
အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းအိမ်ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်. အမေရိကန်အာဏာပိုင်များများမှာ သူ့ရဲ့တက္ကစီ-ဘွတ်ကင်ပလီကေးရှင်းများအဘယ်ကြောင့်အချို့သောဗြိတိန်နိုင်ငံအသုံးပြုသူများကိုဆနျးစစျ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့စီးဘို့တရားစွဲဆိုခဲ့ကြသူတို့စာအုပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ပါစေဘဲ. Uber ကလုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်၏သက်သေအထောက်အထားမရှိမြင်ဘူးကပြောသည်.
အခြားဥရောပမြို့ကြီးတွေမှာသူ့ရဲ့ဥပဒေရေးရာဒုက္ခများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, Uber ကတခြားနေရာရင်ဆိုင်သောကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအီတလီမှာ operating ခဲ့. သို့သော်ကုမ္ပဏီယခု၎င်း၏ Pop ဂီတဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်လေးလံသောဒဏ်ငွေ operating ငြိမ်းရက်သတ္တပတ်ရှိပါတယ်.
"ကျနော်တို့ကသိသာ UberPop အပေါ်ဒီနေ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်အလွန်စိတ်ပျက်နေကြသည်, ကျွန်တော်တို့ကိုလေးစားပေမယ့်ကျွန်တော်နားမလညျဘူးကြောင်းကိုတစ်ဆုံးဖြတ်ချက်,"Zac က de Kievit ကပြောပါတယ်, Uber ဥရောပများ၏ဥပဒေရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူး, သူရုတ်တရက်အလုပ်လက်မဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူယာဉ်မောင်းများနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်း.
de Kievit ကတော့ Uber ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်အယူခံနှင့်ဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ "တရားမျှတမှုအာမခံရမည်ဟုဆိုသည်ခဲ့ကွောငျးထောက်ပြမယ်လို့ပြောပါတယ်, အချိုးညီမျှမှု, နှင့်အသစ်နည်းပညာများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိခွဲခြားဆက်ဆံမှု ".
Carlo Alberto Carnevale Caffè, မီလန်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Bocconi ကျောင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါမောက္ခ, Uber အခြေစိုက်သည်အဘယ်မှာရှိ, တရားသူကြီးရဲ့အာဏာရ "ရှက်စရာ" နှင့် "လုံးဝအယူဝါဒ" ဟုဆိုသည်.
"ဒါဟာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏န့်အသတ်များဟာအလွန်ဆိုးရွားလက္ခဏာသက်သေဖြစ် [အီတလီမှာ],"ဟုသူကဆိုသည်. လူတစ်ဦး - - တစ်ဦး၏အခြေခံအပေါ်တစ်ဦးနိုင်ငံတော်အဆင့်မှာဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် "ဒါဟာကျွန်မတစ်ခုတည်းတရားသူကြီးရှိရာ၏သိသောပထမဦးဆုံးအမှုဖြစ်ပါသည် [unsubstantiated] စီးပွားရေးနှင့်သီအိုရီအငြင်းအခုံ။ "
21806	1 App များ, အပိုဒ်, အီတလီ, သတင်း, လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Stephanie Kirchgaessner, နည်းပညာ, Uber
← သတိသမ္အောက်မေ့ Be: မူးယစ်အခမဲ့အခမဲ့ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုမဆိုလိုပေ ထို cyborgs ၏အရုဏ်: လူသားမြားတပါးသောဘုရားတို့ကိုသို့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို →